တရုတ်နိုင်ငံက ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းလျက်ရှိကြောင်း သမ္မတ ရှီပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဆော်လမွန်ကျွန်းစုများနိုင်ငံနှင့် အခြားသော ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့်အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနှင့် နက်ရှိုင်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၌ ၎င်း၏အတွေ့အကြုံကို မျှဝေရန် အသင့်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ပါးရေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်၊ သို့မှသာ အဓိကကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက အသင့်ရှိကြောင်း ဆော်လမွန်ကျွန်းများနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Manasseh Sogavare နှင့် တယ်လီဖုန်းပြောကြားစဉ် သမ္မတ ရှီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 24 (Xinhua) — China is ready to share its experience in poverty reduction and deepen development cooperation with Solomon Islands and other Pacific island countries, Chinese President Xi Jinping said Friday.
Inaphone conversation with Manasseh Sogavare, prime minister of Solomon Islands, Xi said that China is ready to help Pacific island countries findadevelopment path of poverty reduction suited to their own national conditions, so that they can better cope with major public health events and natural disasters, and enhance the capacity to cope with climate change. Enditem
Photo : Chinese President Xi Jinping meets with Solomon Islands’ Prime Minister Manasseh Sogavare at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, capital of China, Oct. 9, 2019. (Xinhua/Yao Dawei)